ဘဝမှာအမြဲဦးမော့နေစေနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » ဘဝမှာအမြဲဦးမော့နေစေနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ?
Min Thuta | Knowledge | December 21, 2018
ဘဝမှာအမြဲအောင်မြင်မှုကိုရရှိနေတာနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ ထိုအောင်မြင်မှုကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လဲလို ပါတယ်။မိမိကြိုးစားမှုအလျောက် ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အမြဲဦးမော့ပြီး နေစေနိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကို ဖော်ပြေပေးပါမယ်…
ကိုယ်လုပ်နေကျမဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစတင်ကြည့်ပါ။ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာဆိုလျင် သင်နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အရာတွေကနေခွဲထွက်ပြီး မလုပ်ဖူးတဲ့အသစ်အဆန်း တစ်ခုကိုလုပ်ကြည့်ဖို့လေ့လာဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ဒါမှသာ ရရှိလာနိုင်မဲ့အခွင့်အရေး အကျိုးအမြတ်ကို မလွတ်တမ်းဖမ်းဆုပ်ထားနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ လူအများစုဟာ ဘဝမှာ လုပ်ချင်တာထက်လုပ်သင့်တာကိုဦးစားပေးလုပ်နေရတာများပါတယ်။ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ သင်လုပ်ချင်တဲ့ သင်နှစ်သက်တဲ့အရာ ၃ မျိုးလောက်တော့လုပ်ပေးပါ။ ဥပမာ သင်ဟာ ဟင်းချက်ဝါသနာပါတဲ့သူဆို ဟင်းလျာအသစ်တွေစမ်းချက်ကြည့်ပါ။ ပန်းချီဆွဲရတာနှစ်သက်သူဆိုလဲ စိတ်နှစ်ပြီးမိမိနှစ်သက်ရာ စိတ်ကူးအတိုင်းဆေးချယ်ကြည့်ပါ။ အကျိုးရလာဒ်အနေနဲ့ သင်ဟာဘဝမှာနေရတာပျော်ရွှင်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်တွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါမှာလဲ စိတ်ဟာပေါ့ပါးနေပါလိမ့်မယ်။အိပ်ရေးဝတဲ့အတွက်စိတ်ဟာလည်းကြည်လင်နေမှာပါ။ အလုပ်ထဲမှာလဲ စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အခါမှ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို ဆယ်မိနစ် ခန့် မနက်စောစောပုံမှန် Exercise လုပ်ပေးတာဟာ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက် အပေါ်အများကြီးသက်ရောက်မှုကောင်းစေပါတယ်။ စိတ်ကိုကြည်လင်စေတဲ့အတွက် သင့်ရဲ့တွေးခေါ်မှုအားကောင်းစေပြီး အရည်အချင်းတွေတိုးတက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အနေနှင့်လည်း ကောင်းကျိုးရှိတဲ့အတွက် ပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အနားကောင်းကောင်းယူပေးပါ။ ဘဝမှာအမြဲ စီးပွားရေး လှုမှုရေး ကျန်းမာရေး စတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနေရတာ ဒါသဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အနားယူဖို့ အချိန်ထားရှိပေးပါ။ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက် ဆိုတစ်ရက် လုံးဝ စိတ်ဖိအားကင်းကင်းနဲ့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အနားယူပေးပါ။နှစ်သက်ရာဒေသကို ခရီးထွက်တာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အသစ်အသစ်သောအရာတွေကို သင်ယူပေးပါ။ အမြဲတမ်းသင်ယူလေ့လာမှုတွေကိုပြုလုပ်နေသူဟာ အသစ်အသစ်သောအရာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေတဲ့အတွက် Idea ကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်ပြီး အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြတဲ့အချက်တွေကတော့ ဘဝမှာအမြဲဦးမော့နေစေဖို့ နေထိုင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းအချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အတွက် Healthy Lifestyle Tip များ
by Min Thuta on March 24, 2019 -0Comments
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... 1. အာဟာရမျှတစေရန်အချိုးကျစားပါ ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးရရန်အတ...
All times are GMT 6.5. The time now is 3:07 am.